Mashiinka Maaskarada Wejiga, Mashiinka Maaskaro Maaskaro - Frand
ku saabsan anaga nagu saabsan
XIAMEN FRAND CILMI CARRUURTA CO., LTD oo ku taal dabaqa saddexaad, No.130 Dhismaha Jiapin Indutrial Park, Guan Kou Zhong Road, Degmada Jimei, Xiamen Fujian, Shiinaha. Waxay ku hawlanayd warshadaha muddo 15 sano ah. Waa shirkad casri ah oo cilmiyaysan iyo tikniyoolajiyad ku takhasustay cilmi baarista habeysan iyo horumarinta noocyo dhammaystiran oo caqli badan oo qalab ah, qalab warshad isku dhafan iyo adeegsiga nidaamyada aaladaha robotka. Waqtigaan la joogo, waxay leedahay afar saldhig oo wax soo saar R&D ah iyo in ka badan 60 shati.
Shirkaddayadu waxay inta badan dabooshaa shan qaybood oo waaweyn oo tamar cusub ah, qaybo gawaarida ah, elektaroonig sax ah, qalabka warshadaha iyo qufulka, iyo nidaamka warshadaha caqliga badan. Qalabka waxaa loo dhoofiyay Jarmalka, Mareykanka, Japan, Thailand, Hindiya, iwm. Qalab caqli badan oo FARDAN leh ayaa ku takhasusay cilmi baarista habeysan iyo horumarinta qalab dhameystiran oo caqli badan, qalabaynta warshad isku dhafan iyo adeegsiga nidaamyada aaladaha robot-ka. Waxay leedahay afar saldhig oo cilmi baaris iyo wax soo saar horumarineed ah iyo in ka badan 60 shatiyeed.
Mashiinka Alxanka Mashiinka Alxanka Si Buuxda Loogu Sameeyo
Mashiinka Maaskaro Caafimaad oo Buuxda
Mashiinka Maaskaro Caafimaad ee Si Buuxda U Leh Auto Mashiinka Alxanka
Mashiinka jirka maaskaro wax soo saarka buuxa automatic, oo ay ku jiraan quudinta, nooca caag strip strip aluminium ...
Maaskarada kalluunka waa inuu la kulmaa EU en149: 2001 P3 standard. Waxaa badanaa loo isticmaalaa in looga hortago f ...
Maalmahan, dad aad iyo aad u tiro badan ayaa u arka suuqa waji-ka-ilaalinta, oo waliba u arka isbeddellada futu ...
Mashiinka maaskaro caafimaad si buuxda auto aan mashiinka alxanka
Si buuxda auto mashiinka maaskaro caafimaad oo aan mashiinka alxanka ...
Mashiinka alxanka mashiinka alxanka alxanka gebi ahaanba si toos ah wajiga uga baxsan ...
Mashiinka maaskaro caafimaad si buuxda auto ...
Mashiinka jirka maaskaro wax soo saarka si toos ah wax soo saarka, oo ay ku jiraan quudinta, nooca caag ah galinta / xarigga aluminium, xulashada goobta, isku dhafka ultrasonic, jarista iyo wixii la mid ah, soosaarku aad ayuu u sarreeyaa, wuxuu soo saari karaa 1-200 gogo 'daqiiqaddii. Awoodda ugu weyn ee xakamaynta xawaaraha isbeddelka ca ...
Maaskarada kalluunka waa inuu la kulmaa EU en149: 2001 P3 standard. Badanaa waxaa loo isticmaalaa in looga hortago siigada warshadaha iyo qiiqa birta ee aadka u wanaagsan inta lagu jiro hawlgalka alxanka. In ka badan 99% ka mid ahi waxay leeyihiin waxtarka sifaynta, taas oo aad ugu habboon deegaanka qoyan iyo kulul ama xidhashada ilaalin muddo dheer; aniga ...
Maalmahan, dad aad iyo aad u tiro badan ayaa arka suuqyada waji-ka-ilaalinta, waxayna sidoo kale arkaan isbeddelka horumarka mustaqbalka. Suuqa waa mid aad u ballaaran. Dad aad u tiro badan ayaa doorta inay iibsadaan qalab farsamo si ay u noqdaan soosaarayaasha maaskaro. Ma leedahay fursadaha soo socda ee aad tixgelinayso markaad dooraneyso waji-waji? ...
mashiinka sameynta maaskaro qalliin, mashiinka sameeyaha maaskaro, Mashiinka qaadashada maaskaro aan tolmo wanaagsan lahayn, Mashiinka haysa tuubada, aan tolmo wanaagsan lahayn mashiinka qaadashada maaskaro, mashiinka sameynta maaskaro wajiga qalliinka,